Staninless သံမဏိသင်တုန်းဆူးဝါယာကြိုး - တရုတ် Hebei Samsung ကသတ္တုဝါယာကြိုးကွက်
သံမဏိသင်တုန်းဝါယာကြိုးသံမဏိစာရွက်နှင့်ဝါယာကြိုးနှင့်အတူဖန်ဆင်းထားသည် AISI 304. သံမဏိသင်တုန်းဝါယာကြိုးသည်အခြားပစ္စည်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါတော့ဘူးဝန်ဆောင်မှုဘဝကမ်းလှမ်းများနှင့်ချေးခုခံ၏အများကြီးပိုကောင်းပိုင်ဆိုင်မှု။ သင်တုန်းဝါယာကြိုး၏ဤကြင်နာဖြောင့်ဖဲကြိုးအတွက်ထောက်ပံ့, တစ်ခုတည်းကွိုင် concertina သို့မဟုတ် concertina သင်တုန်းကွိုင်ကူးနေသည်။ သံမဏိသင်တုန်းဝါယာကြိုးဓါးစတိုင်များအမျိုးမျိုးနှင့်အတူရှိနိုင်ပါသည်: BT-10, BT-12, BT-18, BT-22, BT-28, BT-30, BT-60, etc အဆိုပါဆူးအရှည်, ဆူးအကွာနှင့် ဆူး w ...
သံမဏိသင်တုန်းဝါယာကြိုး သံမဏိစာရွက်နှင့်ဝါယာကြိုးနှင့်အတူဖန်ဆင်းထားသည် AISI 304.
သံမဏိသင်တုန်းဝါယာကြိုး သည်အခြားပစ္စည်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါတော့ဘူးဝန်ဆောင်မှုဘဝကမ်းလှမ်းများနှင့်ချေးခုခံ၏အများကြီးပိုကောင်းပိုင်ဆိုင်မှု။ သင်တုန်းဝါယာကြိုး၏ဤကြင်နာဖြောင့်ဖဲကြိုးအတွက်ထောက်ပံ့, တစ်ခုတည်းကွိုင် concertina သို့မဟုတ် concertina သင်တုန်းကွိုင်ကူးနေသည်။
သံမဏိသင်တုန်းဝါယာကြိုး ဓါးစတိုင်များအမျိုးမျိုးနှင့်အတူရှိနိုင်ပါသည်: BT-10, BT-12, BT-18, BT-22, BT-28, BT-30, BT-60, etc အဆိုပါဆူးအရှည်, ဆူးအကွာနှင့် ဆူး width ကိုသင့်ရဲ့တိကျတဲ့လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ယခင်: hot-Dip သွပ်ရည်စိမ်ဂဟေဝါယာကြိုးကွက်
ဂဟေဝါယာကြိုးကွက် coated PVC
Black က Annealed ဝါယာကြိုး